Toetrandro sy alèjiana: toetra, soritr'aretina ary fiovan'ny toetr'andro | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Portillo Alemanina | 08/04/2021 11:27 | Fisehoan-javatra amin'ny toetr'andro
Ny hery fiarovan'ny zanak'olombelona dia mety tsy hitsimoka amin'ny olona ary, amin'ny fotoana sasany, dia miteraka tsy fahazakana. Ny zavatra mahazatra indrindra dia ny fihenan-tsakafo dia miteraka fitsangatsanganana mitohy sy mampijaly, fitohanana amin'ny orona ary orona mitete tsy tapaka, ankoatry ny vokatra hafa. ny toetrandro sy allergy misy ifandraisany amin'ny olona maro. Ary misy ny olona tsy mahazaka fiovan'ny toetr'andro.
Noho izany dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny fihetsika mahazatra indrindra amin'ny toetr'andro sy ny allergy.
1 Toetrandro sy allergy
2 Antony mahatonga ny toetrandro sy ny mahazaka aretina
3 Miovaova ny toetr'andro
4 Vokatry ny rivotra
Amin'ity karazan'olona ity, ny fanehoan-kevitra mahazatra matetika dia ny rhinitis, ny conjunctivitis mahazaka ary ny soritr'aretina sasany toy ny dermatitis na ny toe-javatra somary henjana kokoa. Rehefa miresaka momba ny rhinitis isika dia midika ny fitsentsenana mitohy izay mazàna misy fiantraikany eo amintsika rehefa tena miharihary isika, ny fitohanana eo amin'ny orona izay tsy mamela antsika miaina tsara ary mitete tsy tapaka ao amin'ny orona. Rhinitis dia iray amin'ireo soritr'aretina tsy mahafinaritra indrindra amin'ny allergy mandalo. Tena soritr'aretina manelingelina tokoa izy ireo izay, indraindray, tsy mamela antsika hanana fiainana ara-dalàna. Ny mahandro tsy tapaka, mievina ary ny mitsoka ny oronao dia tsy mahafinaritra mihitsy.
Fambara iray hafa amin'ny toetr'andro sy ny tsy fahazakana ny fivontosana. Matetika izy ireo dia manana soritr'aretina toy ny maso mangidihidy sy mahasosotra. Misy olona izay mivadika loko mena be ny masony. Amin'ny dermatitis dia mety hiteraka eczema amin'ny hoditra sy ny tohotra. Ary farany, ny sasany amin'ny toetry ny andro sy ny mahazaka aretina dia mety ho matotra kokoa ary manafika ny rafi-pandevonan-kanina sy ny taovam-pisefoana toy ny asma bronchial.
Antony mahatonga ny toetrandro sy ny mahazaka aretina
Ny fananana allergy amin'ny fiovan'ny toetrandro dia avy amin'ny enta-mavesatra sy ny tontolo manodidina antsika. Isika rehetra dia manana predisposition fototarazo hijaly na tsia avy amin'ny tsy fahazakana mankany amin'ny karazan-tavy tsy mitovy. Ny zavamiaina sasany dia azo atambatra amin'ny fomba izay mahatonga ny hery fiarovantsika dia miteraka valiny mihoa-pampana sy ratsy amin'ny fanentanana na zavatra sasany izay antsoina hoe alergen. Rehefa tratran'ireto agents ireto ny marary dia ao anaty hypersensitivity izy ireo amin'ny andiana phenomena sela sy biokimika izay miteraka fanehoan-kevitra amin'ny fomba samihafa araky ny olona tsirairay.
Ny soritr'aretina mahazatra indrindra dia ireo voalaza etsy ambony ireo, fa ny hamafiny sy ny faharetany dia hiankina amin'ny karazan'olona tsirairay sy ny habetsaky ny fiparitahan'ny alergen. Ny alergie no agents tompon'andraikitra amin'ny allergy. Ireto avy dia mety: sakafo, fanafody, poti-drivotra toy ny vovobony, ny akora simika, ny holatra, ny bobongolo, ny farantsakely ary ny bibidia, sns. Rehefa mifandray amin'ny zavamiaina ireo alergen ireo, dia eken'ny hery fiarovan'ny vatana hery manimba izy ireo ary miaro tena amin'ny fanafihana, izay valin'ny hita fa notanisainay etsy ambony.
Ny rivotra dia tompon'andraikitra amin'ny fanaparitahana ny vovobon'ireo zavamaniry mba hanitarana ny velaran'ny fizarana zavamaniry. Izany no mahatonga ny fiovan'ny toetrandro mety hiteraka tsy fahazakana. Ary rehefa manova fotoana isika, toy izany koa ny rivotra, ny hamafiny sy ny làlan-kalehany ankoatr'izay dia manomboka ny voninkazo ireo zavamaniry. Io no dingana voninkazo anaovan'izy ireo vovobony hahafahan'izy ireo hiparitaka amin'ny faritany.
Miovaova ny toetr'andro
Fantatsika izao fa tompon'andraikitra amin'ny fiaretana soritr'aretin'ny allergy ny alergen, andao hojerentsika izay ifandraisan'ny toetrandro sy ny allergy amin'izany. Tokony ho fantatsika fa tsy misy ny allergy amin'ny fiovan'ny toetrandro. Tsy hoe hiteraka soritr'aretina isika alohan'ny hanovana ny fiovan'ny toetr'andro izay mamaritra ny tontolo iainana na ny tontolon'ny olona ao anatin'ny fotoana iray. Tsy izy io dia mpametaka otrikaina. Amin'ny fotoana maro, ny fiovan'ny toetrandro no mitarika ny fitomboan'ny fatran'ny mpitsikilo mahazaka sasany eny amin'ny rivotra, izay no mahatonga ny fihenan'ny mucosa amin'ireo marary allergy.
Handinika isika hoe iza ireo fiovan'ny toetr'andro mifandraika indrindra amin'ireo soritr'aretina ireo. Ny fiovana tampoka amin'ny mari-pana sy ny hamandoana dia matetika miteraka soritr'aretina amin'ireo marary allergy. Ary izany dia satria ny mucosa dia mihetsika amin'ity scenario ity. Ny fiovan'ny hafanan'ny rivotra sy ny hamandoana dia mety miteraka fivontosana. Etsy ankilany, ny mari-pana ambany dia miteraka fiovana amin'ny safidin'ny nasal sy bronchial. Midika izany fa ny azy hanao fifanarahana amin'ny rindrina izy ireo ary hampihena ny rafitra fiarovana voajanahary amin'ny rivotra. Ireo fiovana ireo dia miteraka aretina viralin'ny taovam-pisefoana.
Raha mandeha amin'ny lalana hafa isika, dia hitantsika fa manantena ny fahatongavany ny lohataona, satria misy ny fanadihadiana sasany manamafy fa misy ny sasany Ny hazo mihintsam-bolo any Espana dia mipoitra eo amin'ny 20 andro mialoha ny 50 taona lasa izay. Io fiovana io dia manova ny fivoaran'ny zavamaniry amin'ny fotoana lava maharitra. Ataovy ao an-tsaina fa raha izao no mitohy, dia maro ny olona tsy mahazaka vovobony no ho tratran'ny aretina lava kokoa isan-taona.
Vokatry ny rivotra
Ny fotoana dia iray amin'ireo masontsivana meteorolojika lehibe indrindra tokony ho raisina. Izy io dia miandraikitra ny fanentanana ny spores holatra sy ny vovobony amin'ny rivotra. Amin'ny andro izay be loatra ny rivotra lohataona dia tsy tsara ny mivoaka any ivelany ho an'izay rehetra manana allergy. Ny fanaparitahana sy ny fifantohan-tsiranoka dia miankina amin'ny fifangaroana ateraky ny rivotra. Miankina amin'ny làlan-kalehany sy ny hafainganam-pandehany, azo atao ny manisa isa sombintsombiny mijanona ary hianarana ny kalitaon'ny rivotra mba hampivelatra ny vinavina fanairana ho tombontsoan'ny marary allergy.
Misaotra an'izay, Androany dia manana angon-drakitra izay mampiseho amintsika ny habetsaky ny vovobony eny amin'ny rivotra isan'andro isan'andro isika hahafantarana raha tokony handeha hitandrina isika na hijanona ao an-trano tsara kokoa mba hisorohana ny fihetsiky ny moka.
Ny toetr'andro sy ny tsy fahazakana dia misy ifandraisany ihany koa ny habetsahan'ny hamandoana, ny orana ary ny fanala amin'ny tontolo iainana. Ary ireo fizotran'ny toetr'andro ireo dia miteraka fanasiana na fanadiovana ny tontolo iainana. Midika izany fa ny vovobony dia azon'ny rano mitete ary rehefa mavesatra dia mianjera amin'ny tany izy ireo ary mijanona hatrany. Fahita matetika ny mahita fa ireo marary allergy amin'ny lohataona dia vao mainka miharatsy ny soritr'aretin'izy ireo amin'ny andro mainina sy be rivotra, raha mihatsara amin'ny andro orana izy ireo.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny fifandraisana misy eo amin'ny toetr'andro sy ny allergy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Fisehoan-javatra amin'ny toetr'andro » Toetrandro sy allergy